ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်တော့တဲ့ မွေးနေ့ အမှတ်တရ ပုံရိပ်များကို မျှဝေလာတဲ့ မေတိုးခိုင် - ShwengweGames
ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်တော့တဲ့ မွေးနေ့ အမှတ်တရ ပုံရိပ်များကို မျှဝေလာတဲ့ မေတိုးခိုင်
May 13, 2022 by Shwengwe Games
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ မေတိုးခိုင် ကိုတော့ အထူးမိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ်နော်။အိန္ဒြာကျော်ဇင်ရဲ့တူမ လိုပြောရအောင်ကိုသရုပ်ဆောင်မှုတွေမှာပီပြင်လွန်းတာကြောင့်လဲပရိတ်သတ်တွေကချစ်ခင်‌နေကြရပါတယ်။
မေတိုးခိုင်လေးက အနုပညာ မျိုးရိုး ရှိသူပီပီ ကလေး ဘဝတည်းကအနုပညာလမ်းကြောင်းထက်ဆီကို ရောက်ရှိနေသူလေးဖြစ်ပါတယ် ။ သူမ အသက် ၈ နှစ်အရွယ်မှာ “ဒုတိယမြောက် ရိုမီယို “ ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ပထမဦးဆုံး ကလေးသရုပ်ဆောင်အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မေတိုးခိုင်လေးက ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံကနေ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးအနုပညာအလုပ်တွေ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၇ ရက်နေ့ကတော မေတိုးခိုင် ရဲ့ အသက် ၂၇ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။မေတိုးခိုင်ကတော့ ဒီနေ့ မေလ (၁၃)ရက်နေ့လေးမှာ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေပြီးတော့ မွေးနေ့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ အမှတ်တရပုံလေးတွေကို မျှဝေလာခဲ့ပါတယ်။
“Long overdue birthday post. အမှတ်တရလေးအဖြစ်ပုံလေးတွေစုပြီးတင်မယ်နော် ❤️ နောက်ထပ်မမေ့တော့မယ့်နေ့တစ်နေ့။ တစ်နေကုန် ပီတိဖြစ်စရာလေးတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ မွေးနေ့။ ဖြစ်ချင်တာလုပ်ချင်တာ အမြဲဘေးကပါရမီဖြည့်ပေးတဲ့ ဖူးချစ်ရတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။
မွေးနေ့ကိုပို အမှတ်တရဖြစ်အောင် လုပ်ပေးတဲ့ ချစ်ရတဲ့ ဖူးရဲ့ Maykeys တွေကိုလည်းရင်ထဲကနေအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အလှူငွေ အလှူပစ္စည်းတွေ လှူပေးတဲ့သူတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။”
” ထမင်းဘူးတွေစီစဉ်ပေးတဲ့ စေတနာအပြည့်နဲ့ အန်တီအေးသဇင် နဲ့ masterchef အဖွဲကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အမြဲ အလှူဆိုပါဝင်အားဖြည့်ပေးတဲ့ sunkist ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးကြသူအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် တစ်ယောက်ချင်းဆီမပြန်နိုင်တာလည်းနားလည်ပေးပါနော်။ ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးထွက်သက်အချိန်တစ်ခုအထိ လိုအပ်သူတွေကိုတစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေကူညီနိုင်တဲ့လက်တစ်စုံဖြစ်ချင်ပါတယ် 🙏🏼❤️” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ပီတိလေးကို မျှဝေလာပါတယ်။
ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ ေမတိုးခိုင္ ကိုေတာ့ အထူးမိတ္ဆက္ေပးစရာမလိုေတာ့ဘူးထင္ပါတယ္ေနာ္။အိႁႏၵာေက်ာ္ဇင္ရဲ႕တူမ လိုေျပာရေအာင္ကိုသ႐ုပ္ေဆာင္မႈေတြမွာပီျပင္လြန္းတာေၾကာင့္လဲပရိတ္သတ္ေတြကခ်စ္ခင္‌ေနၾကရပါတယ္။
ေမတိုးခိုင္ေလးက အႏုပညာ မ်ိဳး႐ိုး ႐ွိသူပီပီ ကေလး ဘဝတည္းကအႏုပညာလမ္းေၾကာင္းထက္ဆီကို ေရာက္႐ွိေနသူေလးျဖစ္ပါတယ္ ။ သူမ အသက္ ၈ ႏွစ္အ႐ြယ္မွာ “ဒုတိယေျမာက္ ႐ိုမီယို “ ဆိုတဲ့ ဇာတ္လမ္းထဲမွာ ပထမဦးဆုံး ကေလးသ႐ုပ္ေဆာင္အျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ေမတိုးခိုင္ေလးက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ အဂၤလန္ႏိုင္ငံကေန ျပန္လည္ေရာက္႐ွိလာၿပီးအႏုပညာအလုပ္ေတြ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလ ၇ ရက္ေန႔ကေတာ ေမတိုးခိုင္ ရဲ႕ အသက္ ၂၇ ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ေမတိုးခိုင္ကေတာ့ ဒီေန႔ ေမလ (၁၃)ရက္ေန႔ေလးမွာ သူ႕ရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကေနၿပီးေတာ့ ေမြးေန႔ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ အမွတ္တရပုံေလးေတြကို မွ်ေဝလာခဲ့ပါတယ္။
“Long overdue birthday post. အမွတ္တရေလးအျဖစ္ပုံေလးေတြစုၿပီးတင္မယ္ေနာ္ ❤️ ေနာက္ထပ္မေမ့ေတာ့မယ့္ေန႔တစ္ေန႔။ တစ္ေနကုန္ ပီတိျဖစ္စရာေလးေတြနဲ႔ ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ ေမြးေန႔။ ျဖစ္ခ်င္တာလုပ္ခ်င္တာ အၿမဲေဘးကပါရမီျဖည့္ေပးတဲ့ ဖူးခ်စ္ရတဲ့သူေတြအားလုံးေက်းဇူးအရမ္းတင္ပါတယ္။
ေမြးေန႔ကိုပို အမွတ္တရျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးတဲ့ ခ်စ္ရတဲ့ ဖူးရဲ႕ Maykeys ေတြကိုလည္းရင္ထဲကေနအရမ္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အလႉေငြ အလႉပစၥည္းေတြ လႉေပးတဲ့သူေတြလည္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္။”
” ထမင္းဘူးေတြစီစဥ္ေပးတဲ့ ေစတနာအျပည့္နဲ႔ အန္တီေအးသဇင္ နဲ႔ masterchef အဖြဲကိုလည္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အၿမဲ အလႉဆိုပါဝင္အားျဖည့္ေပးတဲ့ sunkist ကိုလည္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ေမြးေန႔ဆုေတာင္းေပးၾကသူအားလုံးလည္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္ တစ္ေယာက္ခ်င္းဆီမျပန္ႏိုင္တာလည္းနားလည္ေပးပါေနာ္။ ဘဝရဲ႕ေနာက္ဆုံးထြက္သက္အခ်ိန္တစ္ခုအထိ လိုအပ္သူေတြကိုတစ္ေထာင့္တစ္ေနရာကေနကူညီႏိုင္တဲ့လက္တစ္စုံျဖစ္ခ်င္ပါတယ္ 🙏🏼❤️” ဆိုၿပီး သူမရဲ႕ ပီတိေလးကို မွ်ေဝလာပါတယ္။
အလန်းစား ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ပုရိသတွေကို ကြွေစေပြန်တဲ့ ယွန်းမီမီကျော်
”ကြွေကျနေတဲ့ ပိတောက်ပန်းတွေနဲ့ ပန်းချီကား တစ်ချပ်လို လှပနေတဲ့ သူမ​ခြံဝန်းရဲ့ အလှကို ပြသလာတဲ့ ဧငြိမ်းဖြူ”